ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တစ်ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ ကော့ဇ်ဘဇားခရိုင်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းမှာ နေထိုင်သူ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်တွေအရ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ကော်မရှင်နာမင်းကြီး Abu Toha M.R. Bhuiyan က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ စုပြုံနေထိုင်နေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းမှာ ကပ်ရောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်အတွက် သတိပေးနေချိန်မှာပဲ အခုလို ပထမဆုံးအကြိမ် အသေအပျောက် ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေ စိုးရိမ်နေပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင် ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျော် ခိုလှုံနေထိုင်တဲ့ လူနေထူထပ်တဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု မြင့်တက်လာနေချိန်မှာ အခုလို ပထမဆုံး အသေအပျောက် ရှိလာတာကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ အရမ်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ ကော့ဇ်ဘဇားအနီး ဘာလုခါလီ ဒုက္ခသည်စခန်းက ဦးအီစလံက ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။
"အသက် ၇ဝ ကျော် ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာအဖိုး တယောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ ကျနော်တို့လည်းကြားတယ် Ukhiya ဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန်သွားတယ်။ အဲဒီ့အဖိုးက နဂိုက ပန်းနာရောဂါအခံရှိတယ်လို့ ပြောသံကြားတယ်။ အခုကတော့ COVID-19 နဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရဘက်က ဒုက္ခသည်စခန်းတိုင်းကို လူတွေ လူစုလူဝေးနဲ့ မလုပ်ကြဖို့ နောက် အိမ်တွေထဲမှာပဲနေဖို့ ဆိုပြီး လူတွေ မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မထွက်ကြဖို့ အသံချဲ့စက်တွေနဲ့ စခန်းတိုင်းကို လိုက်သတိပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။"
နောက်ထပ်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူ ဒုက္ခသည် အနည်းဆုံး ၂၉ ယောက် ရှိတယ်လို့ လည်း ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးရုံး ပြောခွင့်ရ Louise Donovan က ပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည် အများစုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာစစ်တပ်က ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA လက်နက်ကိုင်တွေအပေါ် နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေးတွေ လုပ်ဆောင်တာမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ထွက်ပြေး ခိုလှုံခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မြန်မာအစိုးရက လက်မခံပေမဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ပြီး စိစစ်လက်ခံမယ်လို့ ပြောထားပါတယ် ရှင်။
COVID-19 ကွောငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရောကျ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတဈဦးသဆေုံး
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံက ဒုက်ခသညျစခနျးတဈခုမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတဈဦး သဆေုံးသှားကွောငျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အာဏာပိုငျတှကေ ပွောပါတယျ။
သဆေုံးသူဟာ ကော့ဇျဘဇားခရိုငျက ဒုက်ခသညျစခနျးတှငျးမှာ နထေိုငျသူ အသကျ ၇၁ နှဈအရှယျ အမြိုးသားဖွဈကွောငျးနဲ့ ဓာတျခှဲစဈဆေးခကျြတှအေရ COVID-19 ရောဂါ ကူးစကျခံထားရသူ ဖွဈတယျလို့လညျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ဒုက်ခသညျ ကယျဆယျရေးနဲ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ကျောမရှငျနာမငျးကွီး Abu Toha M.R. Bhuiyan က သတငျးထောကျတှကေို ပွောပါတယျ။
သိနျးနဲ့ခြီတဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျတှေ စုပွုံနထေိုငျနကွေတဲ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှငျးမှာ ကပျရောဂါကူးစကျနိုငျတဲ့ အန်တရာယျအတှကျ သတိပေးနခြေိနျမှာပဲ အခုလို ပထမဆုံးအကွိမျ အသအေပြောကျ ကွုံခဲ့ရတဲ့အတှကျ ဒုက်ခသညျတှေ စိုးရိမျနပေါတယျ။
ရိုဟငျဂြာ မူဆလငျ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကြျော ခိုလှုံနထေိုငျတဲ့ လူနထေူထပျတဲ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှု မွငျ့တကျလာနခြေိနျမှာ အခုလို ပထမဆုံး အသအေပြောကျ ရှိလာတာကွောငျ့ ဒုက်ခသညျတှေ အရမျးစိုးရိမျနကွေတယျလို့ ကော့ဇျဘဇားအနီး ဘာလုခါလီ ဒုက်ခသညျစခနျးက ဦးအီစလံက ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျးကို ပွောပါတယျ။
"အသကျ ၇ဝ ကြျော ကနြျောတို့ ရိုဟငျဂြာအဖိုး တယောကျဆုံးသှားတယျလို့ ကနြျောတို့လညျးကွားတယျ Ukhiya ဆေးရုံမှာ ကှယျလှနျသှားတယျ။ အဲဒီ့အဖိုးက နဂိုက ပနျးနာရောဂါအခံရှိတယျလို့ ပွောသံကွားတယျ။ အခုကတော့ COVID-19 နဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ ကှယျလှနျသှားတယျလို့ သတငျးထှကျပျေါနပေါတယျ။ အခု ဘင်ျဂလားဒရှေျ့အစိုးရဘကျက ဒုက်ခသညျစခနျးတိုငျးကို လူတှေ လူစုလူဝေးနဲ့ မလုပျကွဖို့ နောကျ အိမျတှထေဲမှာပဲနဖေို့ ဆိုပွီး လူတှေ မလိုအပျဘဲ အပွငျမထှကျကွဖို့ အသံခြဲ့စကျတှနေဲ့ စခနျးတိုငျးကို လိုကျသတိပေးနတောတှရေ့ပါတယျ။"
နောကျထပျရောဂါ ကူးစကျခံထားရသူ ဒုက်ခသညျ အနညျးဆုံး ၂၉ ယောကျ ရှိတယျလို့ လညျး ဒုက်ခသညျမြားဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ မဟာမငျးကွီးရုံး ပွောခှငျ့ရ Louise Donovan က ပွောပါတယျ။
ဒုက်ခသညျ အမြားစုဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈအတှငျး မွနျမာစဈတပျက ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးမှာ ARSA လကျနကျကိုငျတှအေပျေါ နယျမွေ ရှငျးလငျးရေးတှေ လုပျဆောငျတာမှာ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံကို ထှကျပွေး ခိုလှုံခဲ့ကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ရိုဟငျဂြာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို မွနျမာအစိုးရက လကျမခံပမေဲ့ ဒုက်ခသညျတှကေို ပွနျပွီး စိစဈလကျခံမယျလို့ ပွောထားပါတယျ ရှငျ။